Somali News 05.29.21 | KWIT
Somali News 05.29.21
Xeerbeegti ayaa heshay nin shaqaale beeraha ah oo lagu helay dambi dil dil ah darajada koowaad ee afduubkii iyo dilkii Mollie Tibbets ardayada Jaamacadda Iowa ee 2018.
Cristhian (Christian) Bahena (Buh-he-nuh) Rivera ayaa hada lagu xukumi doonaa xabsi daa’in iyada oo aan suura gal ahayn in lagu sii daayo.
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay ku dartay seddex dhimasho oo kale sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19. Waxaa jiray 99 kiis oo cusub.
Toddobaad ka hor, ardayda guud ahaan gobolka Iowa waxaa loo oggolaaday inay ka soo qayb galaan fasalka iyaga oo aan waji lahayn markii ugu horreysay sannad dugsiyeedkan, ka dib markii Guddoomiyaha Iowa uu ansixiyay sharci mamnuucaya waajibaadka maaskarada ee dugsiyada.
Madaxa Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu u sheegayaa Siouxland Warbaahinta Dadweynaha markasta oo ay jiraan talaabo meesha ka saaraysa qalab taageeri kara xaddidaadda fiditaanka cudur heer maxalli ah, caafimaadka dadweynaha ayaa walwal qaba.
Maanta, Degmada Iskuulka Bulshada ee Magaalada Sioux waxay soo saartay warbixinteedii ugu dambaysay ee COVID-19 ee sanadka oo muujinaysa kiisaska cusub ee COVID-19 iyo in ka yar konton arday karantiil ah.
Gawaarida Cuntada ee Jimcaha waxay ku soo laabtaan bartamaha magaalada Sioux City hal toddobaad gudahood. Xilligu wuxuu socon doonaa illaa Ogosto laga bilaabo 11-ka subaxnimo illaa 1:30 duhurnimo. at Pearl Street Park.
Cimilada oo aad u qabow awgeed usbuucan fasaxa ah, ayaa dib loo dhigay furitaanka Xarunta Biyaha Qoyska ee 'Riverside Family Aquatic Center'. Xarunta ayaa furi doonta sanadka Sabtida soo socota, 5-ta Juun. Labada barkadood ee kale ee magaalada, Leif Erickson iyo Lewis ayaa loo qorsheeyay inay bilaabaan xilliyadooda Sabtida, Juun 12. Shanta shaash ee magaalada ayaa wali la qorsheeyay inay furmaan berri.
Somali News 05.28.21
By Halima Osman • May 28, 2021
Unicameral-ka Nebraska wuxuu soo gabagabeeyay kalfadhi, in gudoomiyaha, isagoo daliishanaya dilal badan oo biilal dhimis ah, oo loogu yeeray "taariikhi ah".
Sharci-dajiyayaashu waxay ka takhaluseen diidmada Guddoomiyaha Gobolka Ricketts ee shaambada cuntada iyo barnaamijyada gargaarka kululaynta
Sharciyada cusub ee la dejiyay waxay u oggolaan doonaan ku dhowaad 4,000 qoysaska Nebraska inay u qalmaan dheefaha kaalmada cuntada ee federaalka iyo ballaarinta u-qalmitaanka gargaarka kuleylka ee federaalka.